Kutheni i-WiFi yakho iphumelela kwaye ingawulungiselela njani?
9 UCanzibe 2017
Kutheni i-WiFi yakho iphumelela kunye nendlela yokuyilungisa
Kutheni i-WiFi iphumelela
Iziteshi kunye namaFrentshi
phantse Wifi Sucks kumanethiwekhi asekhaya. Sonke sinyamezele ukusetyenziswa kakubi kwe-WiFi yasekhaya kunye nokuxhatshazwa okulandelayo, ukuphazamiseka, kunye nokulungiswa kwamakhaya ngokugqithiseleyo kuneenkolelo. Ukuba ngaba u-IT oyilungeleleneyo, ufuna indlela yokwazisa ngokukhawuleza kwintsapho kunye nabahlobo ukuba kutheni ukutshatyalaliswa kwabo bembethe iifowuni zabo zokumkela izitshixo kungeke kusebenze-kwaye kuya kuthini na?
Ngethuba lokuba ungaqhelekanga kwi-IT kwaye ufuna indlela yokufumana amava aqinileyo ekuhlaleni inkqubo ye-WiFi, eli thunyelwe liyisiseko esiluncedo kwi-WiFi yokucwangcisa kunye nesikhokelo sokusebenzisa ikhaya lakho njengetrayi yokusebenza yezixhobo ozisebenzisa usuku ngalunye njenge-IT genius.
I-WiFi ngokwemvelo yayo yimbi kakhulu kunokuba ixhunyezwe ngokubhekiselele kumgangatho ongaxhaswanga kunye namandla ophawu. Izibonakaliso ezihamba ngaphaya kwendawo ebonakalayo njengetambo inendlela efanelekileyo. Iimpawu ezingenazintambo ziyakwazi ukudibana kunye kwaye ziza kulahlekelwa amandla abo zikude zivela kumthombo wokuhambisa. I-WiFi ixhomekeke kwi-trade off, kodwa yinto eninzi abantu abaninzi abazimisele ukuyenza-akukho ndawo yombutho we-ethernet kwinxalenye enkulu yekhaya-ukusebenzisa izixhobo. Ngoko siyanikela amandla ethu kwidatastream ye-blank blanket of scope elandelwayo kwi-ether. Yonke into engcono esingayenza izalisa imingxobo ebhokheni, okwenza kubekho imfutho enobunzima yombutho ojongene nekhaya lakho lonke.
Utshintshe ulandelelanise ukuhamba kwewebhu. Unokuthatha okungakumbi malunga namandla abo kunye nenxaxheba kwimeko yokuqala kaKeith ngokutshintsha nokutshintsha. Kukho nawuphi na, ukutshintshwa kwemali ehlawulwa yi-ISP ngokuqhelekileyo yi-2-in-1 gadgets. Bobabini bajongene nokuhamba kweendlela kwaye bathumele iimpawu zomsakazo eziza kuluhlobo lwakho lwentambo. Yiloo nto leyo i-wire receptioning on your switch and for you can be tempted to point them to the spot in your home, kodwa ke izibonakaliso ezingenazintambo zenzelwe ukuba zichazwe kwaye zidibanise kwii-90-degree edges. Ngoko qinisekisa ukuba baxhomekeke kwiikholeji ezifanayo, ngokubhekiselele okanye ngokuthe ngqo.
Nangona iindawo zokufumana izixhobo ziyakwazi ukwandisa ububanzi, kusenokwenzeka ukuba ayiyi kuhlanganisa yonke indlu yakho. Ekubeni lo tshintsho lwe-2-in-1 benza imisebenzi emibini kwi-double, kwaye kukho enye yodwa kubo, ngokuqhelekileyo ayiphumelelanga ngaphantsi kwezinto eziphathekayo ezibizwa ngokuba yi-WiFi Access Points (WAP).
Umtshini wokuhlaziya kunye ne-WiFi yokusasaza igajethi rhoqo izama ukwenza ngokugqithiseleyo kunye nokulwa ukunika indawo yonke ikhaya. Kunoko, ipakethe ye-WAP evela kumthengisi ofanayo iya kuxoxisana kunye, kwaye inika umlinganiselo omkhulu kummandla wakho wekhaya.
Khumbula ukuba ezi zixhobo ziyi-signal yokuvelisa ngokuqhelekileyo, engacacanga. Ngethuba lokuba unendlu yembali yamanqaku awunakudinga ngaphantsi kwe-WAP kumgangatho ngamnye.
I-WiFi-inikwe amandla kwaye i-WiFi-generating-generic iyakwazi ukuthetha ngokubakala ukuba basebenzise umgangatho ofanayo wokuthetha: umgangatho we-802.11, ochaza indlela iigrijethi ezinokuthetha ngayo ulwazi ngeendlela ezahlukeneyo.
Kwinqanaba le-802.11, kukho iindlela ezahlukeneyo zobugcisa ezisetyenziselwa ukuthetha, zonke izinto ezingenakuvunyelwa, oku kuthetha ukuba azilawulwa kwaye akudingeki ukuba uzikhathaze ngokungavumelekanga ukuthetha nabo. Ziyezona zinxalenye zeenkcukacha zoonobumba abancinci, ngoko ke ukuphazamiseka kwamagqabantshintshi akwenziwanga - awuyi kuxoxisana ngokuphindaphindiweyo okuvela kwi-DJ yakho yasekuseni yasekuseni. Nangona kunjalo, inani elikhulu leziteshi zifuphi kunye kwaye kuyinto eqhelekileyo yokusasazwa kwe-WiFi kwiindlu ezingumakhelwane, okanye kwanezixhobo ezisekhaya elifanayo, ukuba zifake izithuba.
Ungakhetha phakathi kokubeka izixhobo zakho ze-5GHz okanye i-2.4 GHz. Uluhlu olubanzi kunazo zonke i-2.4 kunye neendlela ezikuloluhlu olufanelekileyo ngokwaneleyo ukusuka kwelinye olunye ukuba zingalandeli i1, 6, kunye ne-11. Ezi zigqibo eziqhelekileyo, kwaye kwimeko apho uya kuzikhetha uya kuyidinga ukuqinisekisa ukuba awufihla kunye nabamelwane bakho.
Nangona kunjalo, kwimeko apho unayo i-WAP okanye utshintshile kwisitya esifanayo, kungakhathaliseki ukuba kukho enye yezinto ezintathu ezibhalwe apha ngasentla, ziya kugxininisa kwaye zenze ngcono i-WiFi yakho. Unokudinga ukufudukela kwi-5GHz ngokubhekiselele kwinto yokuba nangona isibonakaliso sinomlinganiselo omncinci, oko kunenzuzo ngokwenene ukuba kuya kwenzeka ukuba kubekho iziteshi ezicacileyo apho.
Yintoni i-Network Time Protocol (NTP)? | Isikhokelo esigqibeleleyo
Indlela yokwakha umsebenzi kwi-Digital Marketing?